Gresy: Fomban-drazana Sy Fomba Amam-panao Amin’ny “Andron’ny Hazavana” · Global Voices teny Malagasy
Gresy: Fomban-drazana Sy Fomba Amam-panao Amin'ny “Andron'ny Hazavana”
Voadika ny 29 Janoary 2012 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Svenska, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Ny “Epiphany” na “Theophany” dia ny fotoana ankalazan'ny Kristiana Tatsinana ny nanaovam-batisa an'i Jesosy tao amin'ny Ony Jordana, noraisina ho ny fotoana nisehoan'ny maha-Zanak'Andriamanitra azy teto amin'izao tontolo izao. Ao Gresy, ny 6 Janoary no andro nolovaina tamin'ny razany, ary fantatra amin'ny hoe Phota (“hazavana”) ka ny fomba amam-panao dia mihodina manodidina ny Fitahiam-ben'ny Rano : hazofijaliana iray no atsipy any anaty rano ary miezaka ny mikaroka izany ny olona mba handray fitahiana sy ho tsara vintana. Ny andro mialoha izay, mihira ny hira fanao rehefa Epiphany ny ankizy, ary ny andro manaraka kosa, 7 Janoary, no fetin'i Jaona Mpanao Batisa.
Ity lahatsary ity dia maneho fety iray fankalazana ny Theofany tao amin'ny farihin'i Vegoritis, any avaratr'i Gresy :
Manerana an'i Gresy, dia mbola velona sy tandreman’ [Greek] ireo mponina any an-toerana sy ireo vahiny mpitsidika ny tanàna tranainy ny fomba amam-panao. Ndeha hiaraka aminay hanao fitsidihana an-tsary sy an'eritreritra ireo tantara malaza fahiny.
Ragoutsaria, Kastoria. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Despoina (CC BY-NC-SA 2.0)
Ny fetibe voalohany indrindra isan-taona dia atao ao Kastoria any Andrefan'i Makedonia, Avaratr'i Gresy ary maharitra hatramin'ny 8 Janoary. Mandritra ny Ragoutsaria (avy amin'ny teny Latina hoe “rogatores”, midika hoe “mpangataka”), mitafy hoditra ondry ny olona, mitondra saron-tava ary mandoko ny tavany sy ny vatany ho mainty, ary midoladola eran'ny làlana mivimbina lakolosy varahina goavana be ; ny feo mankarenina ataon'izy ireo no mandroaka ny fanahy ratsy rehetra handositra. Ilay fankalazana dia arahana betsaka amin'ny mozika nentin-drazana lalaovina amin'ny zava-maneno vita varahina.
@taskar: Τα “Ραγκουτσάρια” στην Καστοριά αποδεικνύουν πως η Μακεδονία είναι μία και είναι Μουσική (χωρίς σύνορα).
@taskar: ny Ragoutsaria ao Kastoria dia manaporofo fa tokana i Makedonia sy ny mozikany (tsy misy fetra).
Lefkada: Ny fitahian'ny voasary
@Nistiko_Arkoudi: Πάμε Λευκάδα όπου το ιδιαίτερο έθιμο κατά την διάρκεια τού αγιασμού των υδάτων είναι τα πορτοκάλια…
@Nistiko_Arkoudi: Ndeha isika ho any Lefkada, toerana izay ny fomban-drazana manokana mandritra ny Fitahiam-ben'ny Rano dia ny voasary…
Any amin'ny nosy Ioniana ao Lefkada, ny olona dia mankalaza ny fomba amam-panao miaraka amin'ny voasary : mitsoraka any an-dranomasina miaraka amina voasary voarohy mitambatra eny an-tanany ry zareo. Alohan'ny Fitahiam-ben'ny Rano, dia ireo voasary efa tamin'ny taona lasa no atsipin-dry zareo any anaty rano. Aorian'izay, entin-dry zareo mody any an-tokantranony ireny ho fitahiana ary ny iray dia avelany ho eo akaikinà sary masina mandritra ny taona. Ity fomba amam-panao ity dia hatry ny [Greek] faha-vanim-potoanan'ny fibodoan'ny Venetiana ilay Nosy (1684-1797) ; tamin'izany fotoana, ny fombafomba rehetra dia natao tao amin'ny lakandranon'ny tanana fahiny nanakaiky ny toerana fambolena voasary makiran'ireo tompon'ny tany famokarana.
Any an-tananan'i Nea Karvali ao Atsinanan'i Makedonia, Avaratr'i Gresy, mankalaza ny Sagia isan-taona ny mponina rehefa harivan'ny Epiphany. Miangona manodidina afon-dasy lehibe iray atao eny an-kianja ry zareo, ka eo ry zareo no misotro, mihira kalon'ny fahiny fanao rehefa mankalaza ry zareo ary mandihy. Ny afo atao araka ny fomba dia ho fandroahana ireo fanahy ratsy, ny “kalikantzaroi” (Rakakabesolan'ny Krismasy), ho any amin'ny farany lalina amin'ny tany ; manana ny fototra niandohany avy any Cappadocia any Azia Minora ilay fomban-drazana, toerana niavian'ny razamben'ireo mponina amin'izao fotoana, izay nifindra monina tany amin'ny 1923 tao anatinà ffanakalozana mponina.
Nandritra ny efa ho 50 taona mahery, ny fomban-drazana antsoina hoe Giala-Giala dia nisy foana [French] tany Ermioni ao Argolis Atsinanan'i Peloponnese. Ny harivan'ny Epiphany, mifamory eo amin'ny seranan'ilay tanàna ireo tanora tovolahy ary manaingo ny sambo aminà ravinà ‘palmes’. Ny ampitso maraina, manao ny fitafy nentim-paharazana fitondra miandriaka ry zareo ary mandeha mihodidina ny tanàna manangona ireo fanomezana sy firariantsoa. Mihira ireo hira fahizay ry zareo mandra-pandefan'ny pretra ny hazofijaliana any anaty rano ary dia mitsoraka maka izany ry zareo.
Ny hajiantsary sy ny sary nasongadina dia maneho ny fankalazana ny fetin'ny Epiphany sy ny “Fitahiam-ben'ny Rano” ao Thessaloniki, Gresy, avy amin'i Konstantinos Tsakalidis, copyright Demotix (06/01/2011).
5 andro izayAngletera